PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: February 2010
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ လာရောက် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည့် ...
ဘန်ကောက်တွင် ပအို့ဝ် ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်ကျင်းပ ။
မေ(၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၉လ အထိမ်းအမ...
SPDC dismissed opposition leader Aung San Suu Kyi ...
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်မြောက်ရန် ၀ ခေါင်းဆောင် စတင်...
တွေ့ဆုံရေးအတွက် တရုတ်ကြားဝင်ပေး - “ ၀ ” ခေါင်းဆောင...
ငြိမ်းချမ်းရေး (၁၆) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် မနောပွဲ ...
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် ၀ ဋ္ဌာနချုပ်လာရန် ပျက်ကွက် ...
ဦးတင်ဦးကို သူရဲကောင်း ဆုချီးမြှင့်။
(၆၂)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်း...
(၆၂)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ (နယ်သာလန်) ဓာတ်ပု...
ကင်တာနာ ခရီးစဉ်အတွင်း အကျဉ်းသားများ အခွင့်အရေးတောင...
အမေရိကန်ကူလျှင် အပစ်ရပ် တပ်ဖွဲ့ အားလုံးကိုရှင်းနိူ...
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဖိနှိပ်မှုများရပ်ရန် AI အဖွဲ့ ...
ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး ပါတီတာဝန် စတင်ထမ်းဆောင်။
နအဖ၏ ထပ်မံကမ်းလှမ်းချက် ဝခေါင်းဆောင် ပယ်ချပြန်။
(၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား ဗီဒီယိုမှ...
၆၃ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား
(၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား(တိုကျို)
ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို အလေးထားကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပြောကြ...
ကေအိုင်အိုနယ်မြေအနီး နအဖစစ်ကြောင်းများ ဝင်ရောက်။
ပြည်ထောင်စုနေ့ နဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်။
နအဖကမ်းလှမ်းမှုကို “ဝ”ခေါင်းဆောင် ထပ်မံပယ်ချ ။
Tokyo Sakura Anyein in Tokyo,JAPAN on 6th.Feb 2010...
(၄၉)နှစ်မြောက် ကချင်တော်လှန်ရေး နေ့အထိမ်းအမှတ်အခ...
ကရင်ဒုက္ခသည်များအား ဌာနေပြန်ပို့မှု ပို့သူတွင် တာဝန်...
ကေအိုင်အိုတော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်း အမှတ် ပွဲတော် စတင်...
အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ဆက်ထိန်းသွား လိုကြောင်း မွန်ပြည်သစ...
(၆၃)နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား(တိုကျို)...
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ လာရောက် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည့် တောင်ရိုး ယဉ်ကျေးမှု စုံညီပွဲတော်။
ပင်လောင်း မြို့နယ်၊ ဆည်ခေါင်း ကျေး ရွာ၌ ပထမဆုံး အကြိမ် တောင်ရိုး တိုင်းရင်း သား များ၏ ယဉ်ကျေးမှု စုံညီ ပွဲတော်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်နှင့် ၁၅ရက် တွင် ကျင်း ပ ခဲ့ရာ တောင်ရိုး တိုင်းရင်းသား များ ပျော်ရွှင် စွာ ပါဝင် ခဲ့ကြသည် ကို တွေ့မြင်ခွင့် ရခဲ့သည်။
ယခင်က တောင်ရိုး တိုင်းရင်းသား များ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ မြို့နယ် အသီးသီးနှင့် မြန်မာပြည် အနှံ့အပြား တွင် ရောက်ရှိနေ သည့် အတွက် ပြန်လည် တွေ့ဆုံကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပွဲတော်ကို ပထမဆုံး ကျင်းပခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပွဲတော်သို့ ကလော၊ ညောင်ရွှေ၊ ပင်းတယ၊ ပင်လောင်းမှ တောင် ရိုး တိုင်းရင်းသား များ စုံညီစွာ တက်ရောက် ခဲ့ ကြသည်။
ဆည်ခေါင်းရွာ ၌ ကျင်းပ
တောင်ရိုး တိုင်းရင်းသား များ ယဉ်ကျေး မှု စုံညီ ပွဲတော်ကို တောင်ရိုး တိုင်းရင်းသား အများ စုနေထိုင် လျက်ရှိသည့် ပင်လောင်း မြို့နယ်၊ ဆည်ခေါင်း ကျေးရွာတွင် ကျင်းပ ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကျေးရွာ သည် အိမ်ခြေ ၂၅၀ ရှိပြီးလူဦးရေ ၅,၀၀၀ကျော် နေ ထိုင် လျက်ရှိသည်။
မြန်မာပြည်တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ပေါင်းစုံ များစွာ နေထိုင် ကြသည့် အနက် တောင်ရိုး တိုင်းရင်းသား များသည် လူသိ နည်းပါး ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သော သစ်ခွ ပွဲတော်၌ လူအများ ၏ စိတ်ဝင်စားမှု ကိုရရှိခဲ့သည်။ တောင်ရိုး စကားပြောဟန် သည် အင်းသား၊ ဓနု၊ ပအိုဝ်း၊ ပလောင် တို့နှင့် ဆင်တူသော် လည်း ကွဲပြား ခြားနားသည်။ တောင်ရိုး ရိုးရာ ၀တ်စုံသည် အမျိုးသမီး သင်တိုင်း ရှည်ဖြစ် ပြီး အမျိုးသား များသည် အင်္ကျီ အပြာရောင် ရှမ်းဘောင်းဘီ အနက်ကို ၀တ်ဆင် ကြသည်။
ရိုးရာ ၀တ်စုံများဖြင့် လှပနေ
ရှေးယခင်က တောင်ရိုး အမျိုးသမီးများ သည် ဂျပ်ခုတ် သင်တိုင်း အရှည် တစ်ထည်ကို သာ ၀တ်ဆင် လေ့ရှိပြီး အိမ်ထောင် ကျပါက ဒူးခေါင်း အောက်တွင် ကြေးခြေကွင်း ကို ၀တ် ဆင် ရသည်။ အပျို များသည် ငွေခြေကွင်း ကို ခြေသလုံး တွင် ၀တ်ဆင် ရသည်။
တောင်ရိုး ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု စုံညီပွဲ တော်သို့ ကျောက်တန်း၊ အောင်ပန်း၊ ကျား တွန်၊ မြေခြား၊ ကျေးတောင်၊ တီကျစ်၊ ဆောင်းဖွတ်၊ နန်းတိုင်း၊ ပင်းတယ၊ နောင်မူ၊ နန်းတိုင်၊ လိုင်ယား၊ ကလော၊ မွန်းပင်၊ က လော သီခေါင်၊ ဟဲဟိုင်း သံတောင်၊ တိုက်ခဲ့၊ မြေနီကုန်း တို့မှ အဖွဲ့ပေါင်း ၃၀ ကျော် လာ ရောက်ပြီး အက ပဒေသာ များဖြင့် ဖျော်ဖြေ ခဲ့ ကြသည်။
တောင်ရိုး တိုင်းရင်းသား များ၏ ချစ်စရာ ဓလေ့
တောင်ရိုး ယဉ်ကျေးမှုသည် မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆင်တူသည်။ တောင်ရိုးတို့ ၏ ချစ်စရာ ကောင်းသော ဓလေ့စရိုက်မှာ အပြန်အလှန် ရိုင်းပင်း ကူညီခြင်း စည်းလုံး ညီ ညွတ်မှုရှိခြင်း၊ လက်စားချို လက်စားဖြူ စနစ် ကို ကျင့်သုံး သည်။ ယခင် ဓလေ့ ထုံးစံအရ တောင်ရိုး အမျိုးသားများသည် မိမိကြိုက်နှစ် သက်သော အမျိုးသမီး ကို ပဲလှော်ဖြင့် ပေါက် ၍ ချစ်ရေး ဆိုကြပြီး အမျိုးသမီး မှပြန်လည် နှစ်သက် လက်ခံပါက ပဲလှော်ဖြင့် ပြန်လည် ပေါက်ရသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့် သည်များက မှတ်တမ်း တင်
အဆိုပါ ပွဲတော်သို့ တောင်ရိုး တိုင်းရင်း သားများနှင့် အတူ ပအိုဝ်း လူမျိုး များ ပျော် ရွှင်စွာ ပူးပေါင်း ဆင်နွှဲ ခဲ့ကြရာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များက ပွဲတော် အား စိတ်ဝင်တစား လာ ရောက် လေ့လာ မှတ် တမ်းတင် ရိုက်ကူးခဲ့ကြ သည်။ တောင်ရိုးယဉ် ကျေးမှု ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် ကျင်းပ သွားရန် စီစဉ်ထားသည်။ ပွဲတော် တွင်တောင်ရိုး သီချင်းများ၊ ဓနုရိုးရာ တေးသီ ချင်းများ၊ မော်အေး ပြိုင်ပွဲများ၊ လှယဉ်ကျေး မယ် ပြိုင်ပွဲများ၊ တောင်ရိုး ဓားသိုင်း အကများ ထည့်သွင်း ပြသခဲ့ ကြသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ မူရင်း “ မြန်မာ ပို့ စ်သတင်းဂျာနယ်”
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း “ ဧရာဝတီ ”
မေ(၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၉လ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား။
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၉လ၊ (၈၁)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်း အမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ၂၆.၀၂.၂၀၁၀ နေ့လည် ၃း၀၀နာရီ မှ ၄း၀၀နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများ “ ၁၀၀ ” ၀န်းကျင်ခန့် တက်ရောက် ပူးပေါင်းပါဝင် ခဲ့ကြပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ ။ Lian Khan Sum(CNC-Japan)
SPDC dismissed opposition leader Aung San Suu Kyi appeal
YANGON, Myanmar – The highest court in military-ruled Myanmar dismissed opposition leader Aung San Suu Kyi's latest bid for freedom Friday, turning down an appeal to end 14 years of house arrest, her lawyer said.
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်မြောက်ရန် ၀ ခေါင်းဆောင် စတင်လိုက်လျော ။
လားရှိုး၌ တွေ့ဆုံရန် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်၏ တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းဆန်လိုက်သော်လည်း တရုတ်၏ ဖြန်ဖြေ ဖြောင်းဖြ မှုကြောင့် တန့်ယန်းမြို့သို့သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ၀ ခေါင်းဆောင် လိုက်လျော သဘောတူ လိုက်ပြီဟု ယနေ့မနက်ပိုင်းက သိရသည်။
စရဖ အရာရှိချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်
“တန့်ယန်းအထိဆိုရင် ၆ နာရီ ကားစီးရတယ်၊ လားရှိုးလောက်တော့ မဝေးဘူး၊ တရုတ်က ဖိအားပေးလာတော့ မသွားလဲ မပြီးဘူး။ ဒီတခေါက်တွေ့ဆုံပွဲက အဖြူအမည်း ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် နောက်ဆုံး အကြိမ်လို့ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ ပြောတယ် ” - ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ၀ အဆင့်မြင့်အရာရှိ တဦးက ပြောပါသည်။
ယနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ၀ ပြည်သွေးစည်းရေး ပါတီ ဥက္ကဌ ပေါက်ယူချမ်းဦးဆောင်သည့် အင်အား ၈ ယောက် နအဖ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရေးအတွက် သံလွင်မြစ် အနောက်ဘက် ကမ်းရှိ တန့်ယန်းသို့ ခရီးထွက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း၊ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ကျောဝ်ကျုံးတန်းမှာမူ ဌာနချုပ်၌ ကျန်ရစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥက္ကဌ နှင့်အတူ ဗိုလ်လာခမ်း၊ တရုတ် -ဗမာစကားပြန် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်မြင့် ခေါ် လီဂျူး လျဲ့၊ ၄၆၈ တပ်မမှူး စိုင်းဆာမ် နှင့် အခြားအရာရှိများ လိုက်ပါသွားကြကြောင်း၊ တရုတ်အဖွဲ့တဖွဲ့လည်းကြား ၀င်ညှိနှိုင်းပေးရန် ရန်ကုန်မှတန့်ယန်း သို့ရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ၀ အရာရှိက ပြောပါသည်။
“လားရှိုးအထိ သွားမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရ မသွားနိုင်ဘူးလို့ ဥက္ကဌကြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းထားတယ်။” - ဟု UWSA စစ်ရုံးချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက လည်းပြောပါသည်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်၍ တိုက်ရေးခိုက်ရေးတွင် ၀ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော်အနေဖြင့် စိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ အတွေ့ အကြုံအရလည်း ရှုံးနှိမ့်ခြင်းမရှိခဲ့ဖူးကြောင်း၊ နအဖ ဘက် ထုံးစံအတိုင်း မရိုးမသား အောက်တန်းကျ သည့် နိုင်ငံရေး ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် သုံးမည်ဆိုလျှင် ယခုတခေါက်က အဆိုးအကောင်း အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်နိုင် ကြောင်း - သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောပါသည်။
တရုတ်၏ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ယခု နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းချက်အား ၀ ဥက္ကဌ ပေါက်ယူချမ်းက လက်ခံသော်လည်း ၀ ပြည်သူလုထု နှင့် ကေဒါ တပ်သားများ၏ ဆန္ဒအရ ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်စွဲပါ တောင်းဆိုချက် ၉ ချက် ကို သာ လက်ကိုင်ပြုထားဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်ပြောပါသည်။
၀ ဥက္ကဌ ပေါက်ယူချမ်း
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ၀ ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက် ၉ ချက် ကို နအဖ ဘက်က လုံးဝ ပါယ်ချထားပြီး ဗမာစစ်အရာရှိ ၃၀ ပါဝင်သည့် တပ်ရင်းတခု အင်အား ၃၂၆ ယောက် ရှိသည့် တပ်ရင်း ၅ ရင်းနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရန်ကိုသာ နအဖ က တဘက်သတ် ဖိပြေားခဲ့သည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ “ သျှမ်းသံတော်ဆင့် ”
အတုအယောင် မြန်မာ မဖြစ်ရဟု ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်ပြော ။
၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် (ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ)
အစိုးရပိုင် သတင်းစာများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် NLD ပါတီကို အနောက်အုပ်စု ၏ သြဇာခံ အဖြစ် မကြာခဏ ရှုတ်ချ ရေးသားမှုများ ရှိခဲ့သည်။
NLDတည်ထောင်စဉ် ကတည်းက အစိုးရက ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်က နုတ်ထွက်သည့် စာရင်းကို အချိန်နှင့် အညီ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် နုတ်ထွက်သူများ ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချ ပြစ်ပယ်ခြင်း မပြု လုပ်သကဲ့သို့ ရန်သူကဲ့သို့လည်း သဘောမထားကြောင်း ဦးဝင်းတင် က ဆိုသည်။
ဦးဝင်းတင်က“ပါတီဝင်တွေနုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာက နိုင်ငံရေး ကစားမှုသက်သက်ပဲ၊ ကျနော်တို့ ပါတီဟာ သူတို့ ထင်သလို ပါတီဝင်တွေ နုတ်ထွက်တာ နှစ် ၂၀လုံးလုံး ရှိလာခဲ့ပြီဗျာ၊ ဒီနေ့ ပါတီမှာ လူတယောက် မှတောင် ကျန်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး၊ နုတ်ထွက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်ကတော့ အယုံ အကြည်မရှိဘူး”ဟုပြောသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ “ ဧရာဝတီ ”
တွေ့ဆုံရေးအတွက် တရုတ်ကြားဝင်ပေး - “ ၀ ” ခေါင်းဆောင်ငြင်းဆန် ။
၀ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ပေါက်ယူချမ်း
WEDNESDAY, 24 FEBRUARY 2010 20:43 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့ စရဖ အရာရှိချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့် တွေ့ဆုံရန် တရုတ်ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိများ ကြားဝင်ပေးသော် လည်း ၀ ခေါင်းဆောင် ထပ်မံငြင်းဆန်ထားသည်ဟု သိရသည်။
“လားရှိုးမှာ ဗိုလ်ရဲမြင့်နဲ့တွေ့ဖို့ ဥက္ကဌကြီးရဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်တွေပါ ယူပေးဖို့ တရုတ်ကို နအဖ က အကူအညီ တောင်းထားတယ်။ မဖြစ် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဥက္ကဌကြီး ပေါက်ယူချမ်းကိုယ်တိုင်သွားအောင် ၀ ကို တရုတ်ကဖိအားပေး ဖို့ပေါ့” - ၀ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနှီးသူတဦးက ပြောပါသည်။
ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ တဖွဲ့က လာမည့် ၂၆ ရက် နအဖ ကိုယ်စား လှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့် လားရှိုး၌ ၀ ခေါင်းဆောင် ပေါက်ယူချမ်း သွားရောက်တွေ့ဆုံရန် ဖြောင်းဖြတိုက်တွန်းပေးခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးကြောင့် ခရီးမသွားနိုင် ကြောင်း ၀ ဘက်က ထိုနေ့၌ပင် အကြောင်းပြန်ကြားလိုက်သည်ဟု - ၀ အဆင့်မြင့် အရာရှိ တဦးကပြော ပါသည်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ ဥက္ကဌ ကြီးက ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူးလေ၊ နေကောင်းကျန်းမာ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သူ ကို နေမကောင်းတဲ့သူက သွားတွေ့ရမယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးသေးဘူး။ တခြားခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်စားသွားဖို့ ပြောပေမယ့် သူတို့က ဥက္ကဌကြီးမှ ဥက္ကဌကြီးဆိုတော့ နောက်ကွယ်မှာ ရိုးသားမှုရှိမရှိမပြောနိုင်ဘူး” - ဟု အဆို ပါ ၀ အရာရှိက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောပြပါသည်။
သီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးသည့် သတင်းအရ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ပတ်က နအဖ ၏ စရဖ အရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ကိုယ်တိုင် အပစ်ရပ်ပြဿနာကူညီဖြေရှင်းပေးရန် တရုတ်ပြည်သို့သွားပြီး အကူအညီတောင်းခံ ခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။
၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့က ၀ပြည်သွေးစည်းရေးပါတီ ဒုဥက္ကဌ ရှောက်မင်လျဲန် နှင့် အခြားအဆင့်မြင့် ၀ ခေါင်းဆောင်များ တန့်ယန်းမြို့၌ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် နှင့်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ထိုစဉ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်က ‘စကားပြော တာအဆင့်မရှိဘူး ၊ အောက်တန်းကျလွန်းတယ်၊ အထက်စီးပြောလွန်းတယ် ’ - ဟု အဆိုပါ ၀ အရာရှိက ပြောပြသည်။
ထို့နောက်ပိုင်း ၀ ခေါင်းဆောင် ပေါက်ယူချမ်းကိုယ်တိုင် သွားရောက်တွေ့ဆုံရန် နအဖ ဘက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် မှာ ၄ ကြိမ်တိတိရှိပြီဖြစ်၏။ ကျန်းမာရေးကြောင့် သွားမတွေ့နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆန် ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရတွေ့လိုက ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀ ရက် ၀ ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမြို့သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ကြောင်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ထံ ၀ ဘက်မှ ပြန်လည် ဖိတ်ကြားလိုက်သော်လည်း လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းမရှိချေ။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ “သျှမ်းသံတော်ဆင့်”
ငြိမ်းချမ်းရေး (၁၆) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် မနောပွဲ ကျင်းပ။
ခိုင်လင်း/ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) နှင့် နအဖအကြား အပစ်ရပ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် (၁၆) နှစ်ပြည့် အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် ကျင်းပသည့် မနောပွဲတော်ကို ယနေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ နမ္မတီးမြို့မြောက်ဘက် (၁ဝ) မိုင်ကျော်အကွာရှိ ကေအိုင်အို တပ်ရင်း (၁၁) နယ်မြေ၊ ကဆုန့် ကျေးရွာတွင် မနောပွဲတော်ကို ကျင်းပနေခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုလ (၂၆) ရက်ထိ (၄) ရက်တိုင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဖိတ်ကြားထားသူများ ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပွဲတော်အတွင်း ဧည့်ခံကြိုဆိုရေး တာဝန်ယူထားသည့် ကေအိုင်အို အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “မီးရထားသံလမ်းရိုး တလျှောက်က ဘုန်းကြီးတွေလည်း ကြွလာပါတယ်။ အပါး (၈ဝ) ဖိတ်ထားပါတယ်။ ကချင်တွေချည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရှမ်းတွေ၊ ဗမာတွေ၊ နာဂတွေ လူမျိုးစုံလာပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ဘက်က ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်က ကချင်တွေလည်း ရောက်နေကြပါတယ်။ လူဦးရေတော့ အတိအကျ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ တချို့က လာနေတုန်း၊ လမ်းမှာပဲ ရှိနေလို့ပါ။ လောလောဆယ် သုံးထောင် လောက်တော့ ရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပွဲတော်ရက်အတွင်း မနောပွဲများကိုသာ အဓိက ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်များလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ညပိုင်းတွင် စတိတ်ရှိုး ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလာရေး၊ ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးရေး အစီအစဉ် အားလုံးကို ကေအိုင်အိုက တာဝန်ယူကြောင်း သိရသည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသားများ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ နအဖနှင့် ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်များအကြား အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
နအဖက ကေအိုင်အိုအဖွဲ့အား နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းခိုင်းနေသော်လည်း ကေအိုင်အိုက တန်းတူရေး နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် မရရှိသေးသရွေ့ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ရန် လက်မခံကြောင်း ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ www.khitpyaing.org/news
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် ၀ ဋ္ဌာနချုပ်လာရန် ပျက်ကွက် ။
ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချမ်း
TUESDAY, 23 FEBRUARY 2010 08:37 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအကြီးအကဲ (စရဖ) ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်သည် ၀ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပါတီ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် ကိစ္စ ဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ကြားချက်ကို ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် ၀ တပ်ဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချမ်းအား ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ ရက် လားရှိုးမြို့သို့ သွားရောက်ရန် နေပြည်တော် မှတဆင့် ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရာတွင် ၀ တပ်ဖွဲ့က ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်အား ၀ တပ်ဖွဲ့ဋ္ဌာနချုပ်ရှိရာ ပန်ဆန်းမြို့သို့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် သွားရန် ၀ တပ်ဖွဲ့က ပြန်လည်ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၀တပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
“၁၁ ရက်နေ့မှာ လှမ်းဖိတ်တယ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချမ်းကို ၁၄ ရက်နေ့ လားရှိုးလာဖို့၊ ၀ က မလာနိူင်ဘူးလို့ ပြော လိုက် တယ်၊ ၂၀ ရက်နေ့ ပန်ဆန်းမှာတွေ့ဖို့ လာခဲ့ပါလို့ ပြန်ဖိတ်လိုက်တယ်။ ၀ ပြောထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ၂၀ ရက်နေ့ ပန်ဆန်းကို ဗိုလ်ရဲမြင့်ရောက်မလာဘူး” လို့ သူက ပြောသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့်အရေးတွင် ၎င်းတို့နှစ်ဘက်မကျေမလည်ဖြစ်နေပြီး ငြိုးသရန် ဘက်များ သဖွယ် တစ်ဖက်၏ အစီအစဉ်ကို တစ်ဖက်က အပြန်အလှန် ပယ်ချနေကြသည်။
ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစ၍ နယ်ခြားစောင့်အရေးဆွေးနွေးရန် မြန်မာစစ်တပ်၏ကမ်းလှမ်းမှု ၃ ကြိမ်စလုံးကို ၀ တပ်ဖွဲ့ က ငြင်းဆန်လိုက်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်ကလည်း ၀ တပ်ဖွဲ့၏ ယခု အစီအစဉ် ကို ပယ်ချလိုက်ပြန်သည်။
“ပန်ဆန်းကို ဗိုလ်ရဲမြင့်မသွားဘူးလို့ အကြောင်းကြားပြီးပြီ၊ သူတို့ ဒီကြားထဲမှာတော့ ထပ်ချိန်းမှာပဲတွေ့ဖြစ်မယ်။ မတွေ့ဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ မရေရာသေးဘူး ” လို့ သူက ဆက်ပြောသည်။
၀ တပ်ဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချမ်းက မြန်မာစစ်တပ်၏ ဖိတ်ကြားသည့် နေရာသို့ မသွားရောက်နိုင်ခြင်းမှာ ကျန်းမာရေး မကောင်း၍ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာစစ်တပ်၏နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းလဲရေးအဆိုကို ၀ တပ်ဖွဲ့က အချက် ၉ ချက် ကန့်သတ်ချက် တောင်းဆိုမှု ကိုဆုပ်ကိုင်၍ ငြင်းဆန်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာစစ်တပ်က အကြွင်းမဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖြစ်ရေးကိုသာ ဖိအားပေးနေသည်။
၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP တွင် တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၃ သောင်းဝန်းကျင်ရှိပြီး ၁၉၈၉ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ခွဲထွက်ကာ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့သည်။
မြင့်မောင် တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၈ မိနစ်
www.mizzimaburmese.com/news မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
(၆၂)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား(တိုကျို)
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၁)ရက်။
ပထမပိုင်း အခမ်းအနားအစီအစဉ် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ။ Swan28ktg:
ဒုတိယပိုင်း ရိုးရာယဉ်ကျေးမူ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ။ Swan28ktg:
စတီရီယို အဆိုတော် “ ဆုန်သင်းပါရ် ” ဖျော်ဖြေရေးမှုအစီအစဉ် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ။ Swan28ktg:
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ (၆၂)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို TOKYO Toshima-ku မြို့ နယ် Ikebukuro Kohkaido ခမ်းမမှာ ဂျပန်နိူင်ငံရောက် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ မှ ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်ကာ ညနေ ၆ နာရီ မှ ၉ အထိ နှစ် ပိုင်းခွဲပြီး ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစီအစဉ် ပထမပိုင်းမှာ အဖွင့် ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကို Pu(Rev.)Ronald Lawm Bik မှ ဆုတောင်း ပေးပြီးသည့်နောက် ချင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်)CNC-Japan ဥက္ကဋ္ဌ Pu Thang Nang Lian Thang မှ အဖွင့်အမှာစကားကို ဂျပန်နိူင်ငံရောက် ချင်းမျိုးနွယ်စုများ ကိုယ်စား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အထူးဧည့်သည်တော် Mr.Hisao Tanabe (U Shwe Ba, A friend of Chinland) မှ ချင်းအမျိုးသားနေ့အတွက် နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားပြောကြားပြီး ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းကို Daw Ngun Than မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်အကြောင်းကို ပါဝါပွိုင့် ဖြင့် မိတ်ဆက် တင်ပြပြီး ချင်းပြည်နယ်မှာ `ကြွက်`များကြောင့် သီးနှံများ ဖျက်ဆီးခံရပြီး အငတ်ဘေးကြုံတွေ့ နေရပုံကို ရှင်းလင်းသွားပါသည်။ ဤ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ချင်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားမှ ကောက်ခံရရှိသည့် အလှုငွေများကိုလည်း ကြွက်အန္တရယ် ကျရောက်သည့် ဒေသ သို့လှုဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။
ဒုတိယပိုင်း ရိုးရာယဉ်ကျေးမူ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် မှာ ချင်းရိုးရာ တေးသီချင်းများ ၊ Fashion Show အစီအစဉ်များ ၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား ရိုးရာ ၀ါးညှပ်အက တို့ ဖြင့်တင်ဆက်သွားပြီး အထူးဧည့်သည်တော် စတီရီယို အဆိုတော် “ ဆုန်သင်းပါရ် ” နှင့် ကိုအောင်ပဏ်းတို့ မှ ခေတ်ပေါ်တေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက် သွားခဲ့ကြပါသည်။ ချင်းတောင်တန်းသို့အလည်တခေါက် လာခဲ့ပါ တေးသီချင်းဖြစ် စုပေါင်းသီဆိုကြပြီး အခမ်းအနားကို ည ၉ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဒီနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၂)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိူင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စု ဘွား တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ နှင့် ဂျပန်ဧည့်သည်တော်များ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း (၃၀၀)ကျော်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ ရပါသည်။ မိမိတို့ အထင်ကရနေ့ များ မိမိတို့ ရဲ့ ရိုးရားယဉ်ကျေးမှုများ ကို စည်းစည်း လုံးလုံးနဲ့ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်နိူင်ခဲ့တာကို တွေ့ ရသည့်အတွက် အလွန်ဘဲ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
(၆၂)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ (နယ်သာလန်) ဓာတ်ပုံသတင်း ။
ကင်တာနာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်မရဘဲ ပြန်လည်ထွက်ခွာ ။
ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် NLD ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦး တို့နှင့် မစ္စတာ ကင်တာနာ တွေ့ဆုံစဉ်
(ဓာတ်ပုံ - UNIC-Yangon)
FRIDAY, 19 FEBRUARY 2010 19:52 ဇာနည်မာန်
ဦးတင်ဦးသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး မကြာသေးမီကမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးသမားများကို ဆက်ပြီး ချုပ်နှောင်ထားခြင်းသည် နိုင်ငံရေး ပြဿနာသာမက လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကင်တာနာအား တင်ပြခဲ့သည်ဟု ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲကတော့ အခုထိ အဆုံးအဖြတ်မရှိသေးပါဘူးလို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျမှ ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ရေးဟာ ပထမအရေးကြီးသလို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ တွေ့ရေးဟာ ဒုတိယ အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒီကိစ္စမှ မဖြစ်လို့ရှိရင်လည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ထွက်ပေါက်ကို သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အန်ကယ်လ်တို့ ပြောပြ လိုက်ပါတယ်”ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
www.irrawaddy.org မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
ကင်တာနာ ခရီးစဉ်အတွင်း အကျဉ်းသားများ အခွင့်အရေးတောင်း ။
အကျဉ်းသားများ ကိုယ်စားဟု ရေးသား ထားသည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အင်းစိန် ထောင်တွင်းမှ ပေါက်ကြား လာသည့် လျှို့ဝှက်စာတွင် အကျဉ်းသား များ၏ ကျန်းမာရေး၊ စာရေးသား ဖတ်ရှုခွင့် ရရှိရေး၊ ထောင်တွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်ရေး စသည့် အချက်၅ချက် ပါရှိသည်။
အဆိုပါ အကျဉ်းသား အခွင့်အရေးတောင်းဆိုသည့် စာ၌ မိသားစုများမှ သွင်းပို့သော စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်စသည်များကို ဆုတ်ဖြဲပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သတင်းစာပုံမှန်မရရှိခြင်းများ အပါအ၀င် အကျဉ်းသားများအနေဖြင့် ထောင်တွင်း စာပေရေးသားလေ့ကျင့်ခွင့်၊ မိသားစုထံ စာရေးသားခွင့်များ မရရှိ သကဲ့သို့ စာရွက်၊ ဘောလ်ပင်စသည်များကို လက်ဝယ်တွေ့ရှိပါက စစ်ခွေးတိုက်သို့ ပို့ဆောင် အရေးယူသည်ဟုလည်းပါရှိသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအနေဖြင့် တနေ့တွင်၂နာရီသာ အပြင်ထွက်ခွင့်ရပြီး ကျန်အချိန်များတွင် အပြင် ထွက်ခွင့်မရသည်ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
မစ္စတာ ကင်တာနာ ၏ ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အတွင်း ဘူးသီးတောင်ထောင်သို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က လောင်စာဆီ ဈေးမြှင့်တင်မှုကို လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့သည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။
ထို့အတူ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသော နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ပေးရန် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုထားသည်။
အမေရိကန်ကူလျှင် အပစ်ရပ် တပ်ဖွဲ့ အားလုံးကိုရှင်းနိူင်မည်ဟု သျှမ်းပြည်တိုင်းချုပ်ကပြော။
Monday, 15 February 2010 18:52 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဖိနှိပ်မှုများရပ်ရန် AI အဖွဲ့ တောင်းဆို ။
ထောင်ဒဏ် ၉၃ နှစ် ချမှတ်ခံထားရသည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဦးခွန်ထွန်းဦး။ AI အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတွင် အကျဉ်း ကျနေသော တိုင်းရင်းသားများ အကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားသည် (ဓာတ်ပုံ - သျှမ်းသံတော်ဆင့်)
TUESDAY, 16 FEBRUARY 2010 18:01
ယခုနှစ် အတွင်း ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတို့အပေါ် ဖိနှိပ်မှုများ ရပ်တန့်ရန် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ (AI)က မြန်မာအစိုးရကို ယနေ့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတို့၏ အခန်း ကဏ္ဍသည် အလွန် အရေးကြီး သည်ဟု AI အဖွဲ့မှ မြန်မာ့ ရေးရာ သုတေသီ မစ္စတာ ဘင်ဂျမင် ဇာဝါကီက ပြောသည်။
“သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု တွေကို အစိုးရက အပြင်းအထန် ဖိနှိပ်တဲ့ နည်းနဲ့ တုံ့ပြန် နေပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် မှာလည်း တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ အပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေ ပိုများ လာမှာကို စိုးရိမ်ရပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
စာမျက်နှာ ၅၈ မျက်နှာ ပါရှိသော အစီရင် ခံစာတွင် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူ တိုင်းရင်းသား ဦးရေ ၇၀၀ ကျော်တို့၏ ၂ နှစ်တာ အတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များကို ဖော်ပြထားသည်။
တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများကို အာဏာပိုင်တို့က အသေးစိတ် စောင့်ကြည့်ပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
AI အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို သဘောတူ ထောက်ခံကြောင်း ကရင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (KHRG) မှ စောအဲလ်ဘတ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ တိုင်းရင်းသား ဒေသမှ အရပ်သားများလည်း အန္တရာယ်နှင့် ကြုံနေရသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“တိုက်ပွဲတွေ မကြာခဏ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒေသခံ ရွာသူ ရွာသားတွေက တောထဲတောင်ထဲကို ထွက်ပြေးနေကြရတယ်” ဟု စောအဲလ်ဘတ်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း ပြုလုပ်မည်ဟု ကြေညာထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတမှု ရှိမည်ဟု မယူဆကြောင်း စောအဲလ်ဘတ်က ဆက်ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများ ရပ်တန့်ရေး တောင်းဆိုသည့် AI အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ အစိုးရက တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
AI အဖွဲ့သည် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် AI အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တချို့သည် ၂၀၀၃ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့သည်။
www.irrawaddy.org/ မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ယနေ့ပြုလုပ်သည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် အန်အယ်လ်ဒီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး တက်ရောက်ကာ အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်သည်ဟု သိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ)ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဦးအုန်းကြိုင်က “စီအီးစီ အစည်းဝေး ကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးတင်ဦး တက်ရောက်လာပြီး သူ့မူလတာဝန် စီအီးစီ အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးသည် ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွင်လည်း ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများအား ကူညီစောင့်ရှောက်နေသည့် ဗဟိုလူမှု အထောက်အကူအဖွဲ့တွင်လည်း ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပြီး အဆိုပါတာဝန်များကို ယနေ့စတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
ယနေ့တွင် စီအီးစီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံကာ ဦးတင်ဦးက သြ၀ါဒစကားပြောကြားပြီး အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များအား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကာ သတင်းထောက်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဦးတင်ဦးက အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များအား ၎င်း ထိန်းသိမ်းခံနေရစဉ်ကာလအတွင်း ကြံ့ကြံ့ခိုင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံပြီး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး ဆက်လက်ရပ်တည်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မှုများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
“ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတန်းမှာ ကြေညာထားတဲ့အထိ တောက်လျှောက်သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို သူလေးစား ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်း၊ သူလည်း ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ့် အကြောင်းတွေ ပြောပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
အန်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ်၌ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၆) ရက်နှင့် (၁၇) ရက်တို့တွင် ဗဟိုကော်မတီ (စီစီ) ရွေးချယ်ရေး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် အတွက် အစည်းအဝေး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်တိုင်း တခုချင်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
ပေါက်ပေါက်/၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
ယခုလ (၁၁) ရက်နေ့က နေပြည်တော်၊ စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဌာန (စရဖ) ရုံးချုပ်မှ ဝတပ်ဖွဲ့ထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ယခုလ (၁၄) ရက်တွင် ဝတပ်ဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချန်း အနေဖြင့် လားရှိုးမြို့သို့ လာရောက်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့မှုကို ဝတပ်ဖွဲ့က ပယ်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဝတပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့ပြောတဲ့နေ့ဟာ တရုတ် နှစ်သစ်ကူးနေ့လည်း ဖြစ်တယ်၊ နောက်တခုက ဥက္ကဋ္ဌက ကျန်းမာရေးလည်း မကောင်းဘူး။ အဲဒါကြောင့် အခုလ (၂ဝ) ရက်နေ့ ပန်ဆန်းကို ဗိုလ်ရဲမြင့် ကိုယ်တိုင်လာဖို့၊ တကယ်လို့ ပန်ဆန်းလာမယ်ဆိုရင် အဆင်သင့် ပြင်ထားမယ်၊ အစစအရာရာ တာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ဘက်ကတော့ ဘာမှ အကြောင်းမပြန်လာသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဝတပ်ဖွဲ့က ငြင်းဆိုမှုအပေါ် နေပြည်တော်၊ စရဖရုံးချုပ်မှ မကျေမနပ်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ဝတပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များနှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
၎င်းက “တရုတ်နှစ်သစ်ကူးက မြန်မာပြည်က ဝတွေနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။ ပေါက်ယူချန်းက လားရှိုးကိုတော့ မလာနိုင်ဘူး။ တရုတ်ပြည်၊ ကူမင်းတော့ သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီး စကားနာထိုးသွားတယ်တဲ့။ အမှန်ကတော့ဗျာ တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအရ ဟိုဘက် ဒီဘက် ကူးလူးဆက်ဆံရတာ ရှိတယ်။ နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ အပြန်အလှန် လည်ပတ် စားသောက်ကြတာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့် (၂ဝ) ရက်နေ့မှ လာဖို့ ချိန်းလိုက်တာ။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် လာတွေ့လို့ ရတာပဲ။ ဗိုလ်ရဲမြင့် ပန်ဆန်းကို လာဖူးသေးတာပဲ။ (၃) ည လာအိပ်သွားသေး တာပဲ” ဟု ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီ (၅) ရက်နှင့် ယခုလ (၆) ရက်ကလည်း လားရှိုးမြို့သို့ လာရောက်ရန် ဝတပ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချန်းအား ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ဝတပ်ဖွဲ့ကမူ ပေါက်ယူချန်း ကျန်းမာရေး မကောင်းသဖြင့် မလာရောက်နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူချန်းအား ဆက်တိုက်ဆိုသလို လာရောက်ရန် ကမ်းလှမ်းနေမှုမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးရန်မျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ အခြားအကြောင်းများလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း စစ်ရေးအကဲခတ် တဦးက ခန့်မှန်းသည်။
ဝတပ်ဖွဲ့ကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရန် နအဖက ဖိအားပေးပြောဆိုနေပြီး ဝတပ်ဖွဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှောက်မီလျှံ ဦးဆောင်သည့် ဝကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နအဖကိုယ်စားလှယ်များအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့သော်လည်း အဆင်မပြေနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဝခေါင်းဆောင် ပေါက်ယူချန်းအား ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကမ်းလှမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
(၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (တိုကျို)
Posted by PNSjapan at 9:21 PM0comments
၆၃ နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို Osuka Minami Hall တွင် နေ့လည် ၁ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၁ နာရီ တိတိ
အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် မင်းဝင်းတေဇ၊ ကျော်သန်းလှိုင်၊ သိန်းရယ် တို့က ဆောင် ရွက်ကြပြီး ဂျပန်ဘာသာပြန်အဖြစ် ဆရာ ဦးရွှေဘ(ခ) ဆရာ ၀ါတာနာဘေ က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အစီအစဉ် ၁ အရ သဘာပတိများနေရာယူခြင်း
အစီအစဉ်၂ အရ တိုင်းရင်းသားေါပင်းစုံမှ ပြည်ထောင်စုအလံသယ်ဆောင်ပြီး အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း
၁ နာရီ ၅ မိနစ်
AUN Japan ဥက္ကဋ္ဌမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့။
အထူးဧည့်သည်တော် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခိုင်အောင်ဝင်းမှ ပြည်ထောင်စုနေ့အကြောင်း ဆွေးနွေး။
၃ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို အဖြေရှာရင် ကျွန်တော်တို့ အခုဖြစ်နေတဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ပြည်တွင်းစစ်လည်း ငြိမ်းချမ်းလာမယ်..။ နအဖကိုလည်း အဲ့ဒီလို လုပ်လာအောင်လို့ နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးကြပါရန်.. ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ လက်သည်ကတော့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး ဘယ်သူသေသေ ငါမသေရင်ပြီးရောဆိုပြီးလုပ်နေတဲ့ နအဖကြောင့်..
အခုတော့ ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီးခွင့်မရခဲ့.. ဗာမာတွေလည်း ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်လည်း အတူတူဆုံးရူံးနေခဲ့...ဒီရဲ့တရာခံဟာ နအဖ စစ်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမစတင်ခင် ၃ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို အရင်ဆုံးပြုလုပ်ပါ .. တိုင်းရင်းသား အကုန်လုံး ဗာမာအပါဝင် ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး.. နအဖ စစ်အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပျက်ခြေမုန်းကြဖို့တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်..
၁ နာရိ ၅၀ မိနစ်
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် အထူးဧည့်သည်တော် ဦးခိုင်အောင်ဝင်း၏ ပြောကြားချက်များကို ဆရာ ဦးရွှေဘက အချဉ်းချုံး ဘာသာပြန်ပြခဲ့ပါသည်။
၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များ၏ အမတ်များဥက္ကဋ္ဌ Mr.SUEMATSU YOSHINORI မှ တတ်ရောက်စကားပြောကြားပေး..
ပြောကြားချက်များကို ဆရာဦးရွှေဘမှ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ပါသည်..
သူပြောချက်များကတော့.. ဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားအတွက် တတ်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း.. လွတ်မြောက်လာခဲ့သော NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၏သား ဦးသန့်ဇင်ဦး အတွက်လည်း ၀မ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်.... အခု ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အစိုးရနှင့် ဗမာအဖွဲ့အစည်းအကြားခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံချင်ပါတယ်.. အခု နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ သူများကို လည်း ဆက်လက် ကူညီပေးပါ့မယ်..
၂ နာရီ တိတိ
ဒီမိုကရေစီအစိုးရလိုချင်တယ်ဆိုပြီး.. ရချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဖွင့်ဟပြောပြပြီး သဘောတုတဲ့လူတွေနဲ့ လက်တွဲကြဖို့ပြောကြားချင်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့.. ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရအသစ်ဖွဲ့နိုင်အောင်ကူညီပေးရင်းနဲ့ အားလုံးလည်း ကြိုးစားကြပါရန် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
၂ နာရီ ၅ မိနစ်
NLD LA JB မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန့်ဇင်ဦးမှ ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်..
သတ်ဖြတ်မူ့ ရက်စက်မူ့တွေဟာ ပြည်နယ် ပြည်မ တွေမှာပါ တန်းတူ ခံစားနေရပါတယ်.. ဒါမျိုးတွေဟာ ဗာမာတွေမှာလည်း ဖြစ်နေပါတယ်.. တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စလှယ်များက ပြည်နယ်ပြည်မကိုမခွဲပဲ အတူတကွ ညီညွတ်ကြမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဗမာတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
၂၀၀၈ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံ ကိုလည်း ပြင်ဆင်ပေးစေချင်ပါတယ် လို့ နအဖ အစိုးရကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ထောင်အသီးသီးမှ အကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်.. သူတို့ကို လွတ်ပေးမှသာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ဖို့အတွက် အဓိကဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီနေ့မှစပြီး ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်ကြမယ်လို့လည်း ပြောကြားရင် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်...
၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်
CNC Japan ၏ အကြံပေး Victor Bya Lian မှ စကားပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖ အစိုးရ ဒို့အရေးသုံးပါးကို ကိုင်စွဲပြီးအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်.. ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး.. တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးလို့ ပြောနေတာ စစ်ဖြစ်နေပါတယ်.. အချုပ်အခြာအာဏာတည်မြဲရေးကတော့ သူ့တို့ရဲ့ အချုပ်အခြာ.. ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးလို့ဆိုပေမယ့်လည်း ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲခံခဲ့ရပြီ.. ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် နိုင်ငံတကာသို့လည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပြီ.. ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် စားဝတ်နေရေး တွေ အခက်အခဲဖြစ်နေခဲ့ရတယ်.. နောက်ဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲ ၃ သန်းလောက်ဟာ မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်ခွါလာပြီး အလုပ်လာလုပ်ခဲ့ရတယ်..သူတို့လည်း ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာ ကျွန်တော် မျက်မြင်ကိုယ့်တွေပါပဲ.. မလေးရှားမှာ ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်..တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ အများကြီးပါ့ပဲ.. IDP က ခန့်မှန်းတာ ၁ မီလီယန်လောက်ရှိမယ်... ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ ပျော်ရွှင်စရာတွေမရှိတော့ဘူးပဲ.. ပုံသဏ္ဍန်မမှန်တော့ဘူး..ကျွန်တော်က ချင်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုတော့ အနည်းငယ် ချင်းအကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်.. နှစ် ၅၀ အတွင်းမှာ ၀ါးတွေပွင့်ပါတယ်.. ၂၀၀၅ -၂၀၀၆ နောက်ပိုင်း ဖြတ်စီးတဲ့ အကောင်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ စားစရာရှားပါးခဲ့ပါတယ်.. ဒါတွေကို နအဖလည်း မကူညီခဲ့.. အခုဆို ချင်းပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်စခန်း ၅၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ.. နအဖ စိတ်ကြိုက်ဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာလည်း ပြည်ထောင်စုအတွက် တစ်ခုမှ အကျိုးမရှိခဲ့ဘူး.. မထည့်သွင်းခဲ့ပါဘူး.. ပြီးတော့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်း နယ်စပ်စောင့်တပ်အဖြစ် နအဖ ဘက်က ၁၀ ရာခိုင်းနှုန်းနဲ့ ပြုလုပ်ရမယ်။ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် နစ်နာမူ့တွေများနေပါတယ်...။
အခုဆို တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်နေတယ်.. နောက်ဆုံးအနေနဲ.. နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ဒီပြသနာကို လာရောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား.. လုံးဝပဲ မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး.. ဒီနှစ် ၂၀၁၀ ဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဟာ ထူးခြားမယ့်လက္ခနာမြင်တွေ့နေရပါတယ်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုပဲ .. အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်သလို.. အဆိုးဆုံးကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားဖို့လို့ပြောကြားရင်း.. အားလုံးလည်း အတူကြိုးစားကြဖို့အတွက် ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်...
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမ္မဂအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်မှ နိူင်ငံတကာသို့ရောက် ရှိနေကြသော ပြည်ထောင်စုဘွား တိုင်းရင်းသားများတို့ သည် နိူင်ငံရေးဆောင်ရွက်သည့်နေရာမှာ နည်းလမ်းများမတူညီကြသော်လည်း ဦးတည်ချက်များ တုညီတာကို တွေ့ ရသည့်အတွက် နိူင်ငံရေးအရ မမှားပဲ လုပ်ဆောင်ချက်များ ယနေ့ မှန်ကန်နေသည်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပကနေ ဖိအားပေးမှုဟာ နအဖ အပေါ်များစွာ သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း နှင့် ယနေ့ NLD ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး လွတ်မြောက်လာခဲ့ခြင်းသည်လည်း နိူင်ငံတကာ၏ ဖိအားပေးတိုက်တွန်းမူများလည်း ပါဝင်သည်ဟု ပြောကြားသွားပါသည်။ ထိရောက်သည့် ဆက်လက်တိုး၍ လုပ်ဆောင်သွားရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။ယခုကဲ့သို့အခမ်းအနား စီစဉ်ကျင်းပနိူင်သည့်အတွက် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်)အား အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ပြောကြားသွားပါသည်။
၃ နာရီ တိတိ
ဂျပန်နိုင်ငံ အလုပ်သမားများ သမ္မဂအဖွဲ့ချုပ် ( JTUC-Rengo ) ကိုယ်စား မြန်မာ့အရေးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော ( မြန်မာ့တရားရုံးတာဝန်ခံ) Mr.SHIOTA ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးတင်ဦးလွတ်သွားပြီးဆိုတဲ့အကြောင်း ဂျပန်သတင်းစားမှာလည်း ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေ ကို မူတည်ပြိးကျင်းပမယ့်ညီလာခံကို အားလုံစဉ်းစားနေကြမယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်အလုပ်သများသမ္မဂမှလည်း မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သုံးသပ်နေပါတယ်။ အ၇င်အပတ်က နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ က အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိတ်ပြီးတော့ အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေ သဘောတူတာကတော့ ဂျပန်ဆိုရင်လည်း ဂျပန်အစိုးရကို ဖိအားပေးရမယ်.. ၁ အချက်ကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ပေးပြီး နာဂစ်အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန် နအဖကို ဖိအားပေးဖို့.. ၂ အချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလည်း ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာအစိုးရကိုသာ အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပြီး..ပြည်သူလူထုကို အကျိုးမပြုပါဘူး...ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
၃ နာရိ ၁၀ မိနစ်
PEOPLE FORUM FOR BURMA (PFB) မှ ဦးရွှေဘမှ ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူပြောကြားချက်ကတော့ နယ်စပ်မှ ဒုက္ခသည်ကိစ္စများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်လ၀က က နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်မယ်လို့သွားတုန်း ဖမ်းထားကြတာဟာ ဒီဂျပန်လ၀က ဒါရှိပါတယ်.. ဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိပါဘူး.. ဒုက္ခသည်အပေါ်ကိုလည်း စာနာနားလည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်..။
၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်
အစီအစဉ်အရ သဘာပတိကြီး AUN ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းစီဝမ်းမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
၆၃ နှစ်မြောက်အတွက် နိုင်ငံတကာမှ တတ်ရောက်လာကြသော လူကြီးများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း.. ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဆရာ ဦးရွှေဘကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း.. ၆၃ နှစ်မြောက် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ ကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ် ၈ မျက်နှာမှာ ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ စစ်တပ်တွေဟာ အထက်က သြောဇာအာဏာကြောင့်သာ လုပ်နေရပါတယ်.. နောက်မကြာမီအချိန်အတွင်း အားလုံးစုစည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ဟာ နအဖ ပြုတ်ကျမယ့်နေ့သာဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းစွာပူးပေါင်းရင်းနဲ့ အတူတူကြိုးစားသွားကြဖို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
၃ နာရီ ၂၀ မိနစ်
ပထမပိုင်းအစီအစဉ်ပြီင်္းဆုံးကြောင်းကြေငြာအပ်ပါတယ်... သဘာပတိကြီးများလည်း နေရာမှ ပြန်လည်ထွက်ခွါမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by aunjp2003 at 2:10 AM0comments
(၆၃) နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို သတင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၄)
ဂျပန်နိူင်ငံ တိုကျိုမြို့Minami OsukaHall တွင် ညီညွတ်သော တိုင်းင်းသားများ အဖွဲ့ အစည်း(AUN-Japan) မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော(၆၃) နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကို စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနား ပထမပိုင်း အစီအစဉ်တွင်
နိူင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းတွင် ယဉ်ကျေးမူ ပဒေသာ ကပွဲ အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး ဂျပန်ရောက် ပြည်ထောင်စုဘွား တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသား စုစုပေါင်း ၅၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Photo by / Lian Khan Sum(CNC)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အမှတ်တရ“youtube-သတင်းမှတ်တမ်း”
“ညီညွတ်ရေးဆိုတာ ဘာလဲ နားလည်ဖို့လိုတယ်။ ဒီတော့ကာ ဒီအပိုဒ် ဒီဝါကျမှာ ညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကို သရုပ်ဖော်ပြ ထားတယ်။ တူညီသောအကျိုး၊ တူညီသောအလုပ်၊ တူညီသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်။ ကျနော်တို့ ညီညွတ်ရေးဆိုတာ ဘာအတွက် ညီညွတ်ရမှာလဲ။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ညီညွတ်ရမှာလဲ။ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ ရှိရမယ်။ ညီညွတ်ရေးဆိုတာက ဘာအတွက် ညီညွတ်ရမှာလဲ။ ရာထူးယူဖို့ ညီညွတ်ရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို နှိပ်စက်ဖို့ ညီညွတ်ရမှာလား။ ဘာအတွက် ညီညွတ်ရမှာလဲ။ အဲဒီတော့ကာ ကျနော်လိုချင်တဲ့ ညီညွတ်ရေးက တတိုင်းတပြည်လုံး လူတမျိုးလုံးရဲ့ လွတ်လပ်ရေး။ လူတမျိုးလုံးရဲ့အကျိုး။ အဲဒီလိုတူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်။ တူညီတဲ့အကျိုး။ တူညီတဲ့အလုပ်။ ဒါတွေကို ရအောင် အဲဒီလို တူညီတဲ့အကျိုး။ တိုင်းသူပြည်သားတွေရအောင် တူညီတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ညီညွတ်ရေးမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ပါးစပ်က ပြောရုံနဲ့မပြီးဘူး။ ပါးစပ်က ညီညွတ်ချင်ပါတယ် ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ အလုပ်မှာလည်း တူရမယ်။ အကျိုးမှာလည်း တူရမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း တူရမယ်။ အဲဒါမျိုးကိုမှ ညီညွတ်ရေးလို့ ခေါ်ထိုက်တယ်”
၁၉၄၆ ခုနှစ် ဖဆပလ ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံ၌ ညီညွတ်ရေးအဆို တင်သွင်းရာတွင် ပြောကြားခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်
ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို အလေးထားကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပြောကြား။
စိုးမိုး/၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ချမှတ်ခဲ့သည့် ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေးသည့် အတွက် တောင်တန်းနှင့် ပြည်မချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပင်လုံစာချုပ် နှင့်အညီ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် အချိန် ရောက်ပြီဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
အန်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ် တွင် ယနေ့ကျင်းပသော (၆၃) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား သဘာပတိ မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ယနေ့အချိန်တွင် ပင်လုံစာချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ဆိတ်သုဉ်းနေသကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ပျက်ပြားနေပြီး ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများလည်း ဆုံးရှုံးနေပါသည်” ဟု အန်အယ်လ်ဒီက ပြည်ထောင်စုနေ့ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် (၆၃) နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တောင်တန်းနှင့် ပြည်မချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပင်လုံစာချုပ် အနှစ်သာရမှာ တိုင်းရင်းသားတို့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အလေးအနက်ထားကြောင်း၊ ယင်းကို အန်အယ်လ်ဒီ အနေဖြင့် ခိုင်မာစွာ တန်ဖိုးထားကြောင်း ထပ်လောင်းပြောဆိုထားသည်။
ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးမူကို ကိုင်စွဲသည့် အန်အယ်လ်ဒီ အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့် တန်းတူအကျိုးခံစားခွင့်များကို ခိုင်မာစွာ တန်ဖိုးထား လေးစား ပါကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထိုအပြင် ယနေ့ကျရောက်သည့် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် အန်အယ်လ်ဒီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် အကျဉ်းကျ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ (၆) နှစ်ကျော်ကြာ အကြောင်းပြချက်မရှိ ချိတ်ပိတ်ခံရသော တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ အန်အယ်လ်ဒီ ရုံးခွဲများကို ပြန်ဖွင့်ခွင့်၊ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့် ပေးရန်နှင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပြီး ဖျက်သိမ်းခံရသည့် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးရန် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ယနေ့ (၆၃) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားသို့ အန်အယ်လ်ဒီ အလုပ်အမှုဆောင်များ ၊ ပါတီဝင်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီဝင်များ၊ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများနှင့် သံတမန်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
Posted by PNSjapan at 12:26 PM0comments
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ၏ တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေအနီးတွင် မိုးမိတ်စစ်ဗျူဟာ လက်အောက်ခံတပ်များက စစ်ကြောင်း သွားလာလှုပ်ရှားနေသဖြင့် ကေအိုင်အိုတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်း စစ်ရေးသတိဖြင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ သစ်ခိုးထုတ်မှုကို နှိမ်နင်းသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မိုးမိတ်စစ်ဗျူဟာမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းမင်းထွန်း ဦးစီးသည့် စစ်ကြောင်းများက ယခုလ (၇) ရက်နေ့မှစတင်၍ မော်တော်ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခြေလျင်ဖြင့် လည်းကောင်း သစ်ထုတ်သည့် လမ်းကြောင်းများတွင် သွားလာလှုပ်ရှားနေခဲ့ရာ ကေအိုင်အို တပ်စခန်းအနီးသို့ ရောက်ရှိလာသဖြင့် စစ်ရေးသတိဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြကြောင်း ကေအိုင်အို တပ်မဟာ (၃) အခြေစိုက်ထားသည့် မိုင်ဂျာယန် ကျေးရွာ ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “တရုတ်နှစ်သစ်ကူးတော့မယ်ဆိုတော့ တရုတ်တွေက ပြန်နေပြီ။ တရုတ်တွေပြန်မှ အဲလို လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ အမြင်မရှင်းကြဘူး။ ကေအိုင်အိုကလည်း ခုလို စစ်ကြောင်းတွေ ကပ်လာတော့ သူတို့နယ်ထဲ မကျော်လာဖို့ စောင့်ကြည့်နေရတယ်။ သူတို့နယ်ထဲ ဝင်မလာဖို့ စစ်ကြောင်းကို ပြောဆိုရတာတွေ လုပ်ခဲ့ရသေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
နအဖစစ်ကြောင်းများသည် တရုတ်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များ ဖောက်လုပ်ထားသည့် သစ်ထုတ်လမ်းကြောင်းများ တလျှောက်တွင် မော်တော်ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် သွားလာနိုင်ရန် ဒေသအတွင်းရှိ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များကို ချောဆွဲအသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အဆိုပါဒေသခံက ပြောသည်။
၎င်းက “ဝစ်သောက်ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေကို ချောဆွဲနေတာ။ ဆီလည်း ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့က အဲဒါတွေနဲ့ သွားလာနေတာ။ သူတို့တပ်မှာ သုံးနေတဲ့ စစ်ကားတွေ မသုံးဘူး။ အရပ်သားကားတွေနဲ့ပဲ။ တောထဲမှာ ဆိုပေမယ့် လမ်းတွေက တရုတ်က ကောင်းကောင်း ဖောက်ထားတာ။ ကား (၂) စီး ရှောင်ကွင်းလို့ရအောင် ဖောက်ထားတာ” ဟု ပြောသည်။
ကေအိုင်အိုအဖွဲ့သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရန် နအဖ၏ ဖိအားပေးခြင်းကို ခံနေရပြီး ပင်လုံစာချုပ်ပါ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲနေကြောင်း၊ အဆိုပါ အခွင့်အရေးများ မရသရွေ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ယခုလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် (၄၉) နှစ်မြောက် ကေအိုင်အို တော်လှန်ရေးနေ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇောင်းဟရား၏ သဝဏ်လွှာ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း နအဖ စစ်ကြောင်းများက ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ် နယ်မြေအနီး ချဉ်းကပ် လှုပ်ရှား လာနေခြင်းဖြစ်သည်။
khitpyaing ဂျာနယ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
Posted by PNSjapan at 1:47 AM0comments
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေး ရေးအတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲကို တိုကျို Shinagawa အရပ်ရှိ နအဖ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့ယနေ့ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၀)ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။
Photo by/ Lian Khan Sum(CNC-Jp)